Iinkqubo zeChlorinator yetyuwa, izixhobo zePhuli yokuDada-iBlueworks
Imali: USD $
Ukubeka iliso kwiKhemistry
Icandelo kunye nezixhobo
Inkqubo yaManzi aTsha
Ukutsha okutsha kunye nokucoceka kwesizukulwana esilandelayo kwiphuli, akukho kwahlukileyo kwinto ephuma kwitephu yakho yasekhaya. Ubungcali kunye namava kwinkqubo yamanzi amatsha.
Akusekho kuxutywa nolwelo okanye ithebhulethi yegesi yeklorini, elinganisiweyo okanye engcolileyo. Ngoku, iiblueworks zikunika izisombululo zokubulala iintsholongwane, unokufumana amanzi acocekileyo, athambileyo nakhuselekileyo. Sinenkqubo yetyuwa ye-chlorinator kunye ne-ionizer kwaye kwi-ozone yexesha elizayo ukubonelela ngomgangatho wamanzi.
Iinjineli e-US, zivunyiwe yi-Energy Star, iingcali ekwenziweni kweempompo zeemoto kunye nabaqhubi, iBlueworks ilapha ukubonelela ngento oyifunayo yeempompo zakho.
Ukuxhasa inkqubo yakho ye-chlorinator esebenza ngokukhululekileyo ukuba nomgangatho wamanzi acocekileyo, acocekileyo, ii-Blueworks zinoluhlu olubanzi lwezinto ezingena endaweni yeeseli. Zithembekile kwaye zihlala ixesha elide njengoko sisenza ngaphezulu kweminyaka eli-16.
I-Blueworks ineempompo zesantya ezahlukeneyo ngeCalifornia Energy Star Approval kunye ne-ETL, ukuvunywa kweCanda CSA kukuqinisekisa ukuba uya kuba nempompo efanelekileyo yedama lakho. Impompo yephuli yeVSP iya kuba yinto ephambili kwimakethi yase-US njengoko isebenza kakuhle kakhulu ukugcina amandla.
I-Blueworks SPP1515VS Ipompo yePhuli
Inkqubo yokuqubha yaManzi eTyuwa iBLSC
Ityiwa Chlorinator BLPT
I-Blueworks IGP2115VS yeMpompo yeSantya esiShukumayo
I-Blueworks AGP1515VS Impompo yesantya eguquguqukayo
I-Blueworks Vsm yokuSebenza ngokuNqabileyo kweSantya esiSebenzayo ...
I-Blueworks Solar Robotic Pool yokucoca
I-Blueworks Pool Chemistry Monitor
I-Blueworks Salinity Tester Kit
I-BLUEWORKS CORPORATION igxile ekuphuhliseni nasekwenzeni uluhlu olubanzi lwezixhobo zamachibi okudada. Njengomvelisi ophambili, simisela isebe kwi-NC, e-USA emva kwenkonzo yentengiso. Emva kweminyaka elishumi yokwandiswa, sikhule saba ngomnye wabathengisi bezinto zokuqubha ezibalulekileyo eMelika.
Iimveliso zibandakanya, i-Chlorinator yetyuwa, i-Chlorinator yeTyuwa yokuTshintsha indawo, iiNkqubo zaManzi eTyuwa, ukuKhanya kwePhuli, iAlarm yePhuli, Isibali sePhuli, iPompo yePom njalo njalo.
Ngokwe-Cdc abukho bungqina bokuba i-Covid-19 ingasasazwa ebantwini ngokusebenzisa amachibi kunye neetubhu ezishushu. Umsebenzi oLungileyo, ugcino kunye nokubulala iintsholongwane kumachibi okudada kunye neetubhu ezishushu (Umzekelo, ukubulala iintsholongwane ngeChlorine kunye neIonizer) kufuneka zisuse okanye zingasebenzi iiNtsholongwane ezibangela iCovid-19.
Sisebenza ngokwesiqhelo ukuKunika iiModeli.
I-12245 yeZizwe iFord Rd, Ste 501 Pineville, NC 28134-8444
Iintsuku ezi-6 ngeveki, ukusuka nge-8: 30 kusasa ukuya kwi-4: 30 ngokuhlwa